Kambodza: Tsy Nisy Fahagagana Nandritra ny Fididianana Ben’ny Tanàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jona 2012 16:44 GMT
Fifidianana fahatelo amin’ny fe-potoa-piasan’ny Filankevi-monisipaly ao Kambodza ny fifidianana ben'ny tanàna notontosaina tamin’ny Alahady 3 Jiona lasa teo, izay manana fe-potoa-piasana 5 taona. Napetraka ny fampiharana ny firafitry ny Filankevi-monisipaly mba hampiroboroboana ny fitsinjaram-pahefana eo amin’ny resaka fitantanana sy mba handraisana fanapaha-kevitra manakaiky ny vahoaka. Tamin’ny taona 2002 sy 2007 no notontosaina ny fifidianana Filankevi-monisipaly farany.
Andron’ny Fifidianana Ben’ny tanàna. Sary tao amin’ny tranokalan’ny Komity Nasionaly misahana ny fifidianana
Niadian-kevitra be ny lohahevitra momba ny fifidianana ben’ny tanàna ary navoaka tamin’ny tranonkala sy ny fampahalalam-baovao sosialy, indrindra tao amin’ny Facebook sy Twitter. Taorian'ny fandehanana teny amin’ny biraom-pifidianana, namoaka avy hatrany ny “tanany misy ranomainty” ireo mpisera Facebook marobe mba hanaporofoana fa efa avy nifidy sahady izy ireo
Mpisera Facebook namoaka sary momba ny antontan-taratasim-pifidianany
Ny mampiavaka ny fifidianana teo dia ny fametrahana fitaovan-tserasera (aterineto) azo hanaovana fikarohana nataon’ny Komity nasionaly misahana ny fifidianana ao Kambodza izay ahafahan’ireo mpifidy manamarina ny lisitry ny anaran’ny mpifidy sy ny biraom-pifidianana.
Nankasitrahan’ireo mpiserasera maro be izany fitaovan-tserasera izany mba hamoahan’izy ireo vaovao sy fanentanana momba ny fifidianana . Phnom Penh Cambodia nanandrana ny fikarohana amin’ny aterineto ary nahita fa nahomby tokoa izany.
Tsy dia matoky aho fa maro ny olona nahita sy (nampiasa sahady ny tranokala). Tena haingana tokoa (ny) teknolojia, afaka manararaotra izany isika. Koa raha te hahita ny anaranao ianao, azonao jerena ao amin’ny solosainao misy aterineto izany ankehitriny. Inoako fa ankafizinao izany ary hozarainao amin’ny namanao hafa ny amin’ity lisitry ny mpifidy amin’ny fifidianana ben’ny tanàna taona 2012 ity. Mahafinaritra!
Araka ny fanambarana ofisialy nataon’ny komity misahana ny fifidianana, antoko politika miisa folo no hifaninana amin’ny fifidianana. Ny antokon’ny fitondrana, ny antokom-bahoaka Kambodziana, no antoko tokana nanolotra kandidà amin’ireo kaominina rehetra 1,633.
Eo amin'ny mpifaninana lahy sy vavy, tsara ny manamarika fa 25,65 isan-jato ny salan'isan'ny vehivavy ao amin'ny lisitry ny kandidà avy amin'ireo antoko 10 amin'ity fifidianana ben'ny tanàna fahatelo ity ka nahitana fiakarana 4,29 isan-jato izany raha oharina tamin'ny fifidianana ny taona 2007. Kanefa na dia eo aza izany fiakarana izany, mbola vitsy an'isa hatrany ny mpifaninana vehivavy na dia maherin'ny 50 isan-jato aza ny fitambaran'ny vehivavy Kambodziana.
Nahitana tombotsoa lehibe ny fampiasana ny fitaovan-tserasera (aterineto) nandritra ny fampielezan-kevitra ary nisy koa ny fangatahana mba hisosa ho azy tsara toy izany ny rafi-pifidianana.
Araka ny efa nampoizina, ny antokon'ny fitondrana no tena manjakazaka amin'ny fifidianana. Nahazo seza 1,592 izy ireo manarak'azy ny antokon'ny mpanohitra miisa roa, ny antoko Sam Rainsy sy ny antoko Zon'olombelona (Human Rights) izay nandrombaka seza 22 sy 18 avy. Nampitaha ny valim-pifidianana tamin'ity taona ity sy ny valim-pifidianana teo aloha ny Komity mpanara-maso ny fifidianana Malalaka sy Mangarahara ao Kambodza.
Hita fa nilamina tsara ny fizotran'ny fifidianana ary tsy dia nahitana herisetra firy, na fampitahorana, na hosoka, na fandikan-dalàna hafa.Na dia izany aza, voampanga ho nampiasa fitaovam-panjakana ny antokon'ny fitondrana mba ahazoany tombotsoa amin'ny fampielezan-kevitra. Nitaraina ny mpanohitra fa mpiasam-panjakana, polisy ary miaramila maro no nanampy tamin'ny fanatontosana ny fampielezan-kevitry ny antokon'ny fitondrana manerana ny firenena. Izany tsy fitoviana eo amin'ny fitaovana ampiasaina izany no mahatonga ny olona marobe hanontany raha tena malalaka sy marina tokoa ny fifidianana.